Abazali bacusulwa ukungasebenzi kohlelo olusha lokubhalisa eGoli | News24
Abazali bacusulwa ukungasebenzi kohlelo olusha lokubhalisa eGoli
Johannesburg - Ngesonto eledlule umnyango wezemfundo eGoli wasungula uhlelo lokubhalisa izingane zebanga 1 nebanga 8 ngokusebenzisa uhlelo lwa-online, kubika iTimeslive.
Kwathi kungakapheli nosuku lokuqala lwase luhluleka ukubekezelana nenani labantu abafuna ukubhalisa izingane. Iziphathimandla zezemfundo zenza isithembiso sokuthi lokhu kuzolungiswa bese kuhlatshelwa mgama ngokubhaliswa kwezingane.
OLUNYE UDABA:Sezingabhalisa online izingane ezikoleni zikahulumeni eGoli
U-MEC wezemfundo kulesi sifundazwe uPanyaza Lesufi utshele abezindaba ukuthi konke sekumi ngomumo futhi abazali bangazama futhi ukubhalisa izingane.
Abazali abafuna ukubhalisa izingane zabo bathi kuze kube yimanje lolu hlelo alusebenzi futhi abakwazi nokungena kwiwebhusayithi yize u-Oupa Bodibe okhulumela lo mnyango wathembisa ukuthi konke kuzobe kusebenza kahle ekuqaleni kwaleli sonto.